★မြန်မာ့အလင်း★: Bodhi Tree Forest Monastery and Retreat Centre
A short video about the Bodhi Tree Monastery, located in Tullera, Northern NSW, Australia. Please visit our website at: http://www.buddhanet.net/bodhi-tree/ for more details, latest news, and information on upcoming meditation retreats and visiting teachers.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:22 AM
စအိုမုဒိမ်းကျင့်ပြီး မွတ်စလင်အတင်းလုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်ကုလားsan
ချေးပေါ-သေးပေါ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူဆဲပဲလား? မေးခွန်းတွေက စိတ်ထဲပါလို့မေးတာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ Allahက မင်းတို့ကုလားတွေကို အသေဆိုးနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ခွေးလို ၀က်လိုသတ်တဲ့အကြောင်းသိရလို့ သွေးပျက်ပြီး လျှောက်မေးထားတာပဲ။ ဘယ်လောက်များသွေးပျက်လဲဆိုရင် ဒီကော်မန့်ပဲ နေရာပေါင်းများစွာမေးထားတာပဲ ကြည့်ပေါ့။ နောက်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ ကုလားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဆီပုံးမှာ ရှင်းပြတာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။ အခုလည်း အဲဒါပဲ ပတ်ပြောနေတယ်… . အခုတခါရှင်းပြရင်လည်း နောက်ထပ် သွေးပျက်ရင် မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကုလားလို့ စွပ်စွဲဦးမှာပဲ မဟုတ်လား? ချေးပေါ သေးပေါမွတ်ဆလင် ကျွန်ကုလားကို လူရာသွင်းပြီး ရှင်းပြရင် ငါပဲ အရူးဖြစ်မှာပေါ့။
ဒီမယ်… ကျွန်ကုလား.. ငါမေးမယ်။ ဖြေစမ်း။ မင်းတို့ပလီဆရာတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မကောင်းကြောင်းသင်ပေးတာ ဒါအကုန်ပဲလား? ဒီထက်ပညာသားပါပြီး အဆင့်ရှိတဲ့ အပုတ်ချတဲ့စကားကို ပလီဆရာတွေ ကြံဆခိုင်းပါဦး။ နောက်တစ်ခုပြောရဦးမယ်။ ငါတို့တွေ မင်းတို့ကို ဆော်ကားတာတွေ.. ကျွန်ကုလားလို့ခေါ်တာတွေကို စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ Allah ရဲ့ ဆန္ဒတော်အတိုင်း မင်းတို့ကို အနိုင်ကျင့် ဆော်ကားနေတာ ဖြစ်တယ်။ (ဟဲဟဲ.. ပလီဆရာရဲ့ လေသံနဲ့ပြောရရင် မင်းတို့တွေ allah ပေါ်ဘယ်လောက်အထိ ချစ်လဲဆိုတာ စမ်းသပ်တာပါ။) ကုလားတွေကို အနိုင်ကျင့်ဖို့ ငါတို့ကို Allah ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ငါတို့လုပ်ရပ်မကျေနပ်ရင် ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allahကို ဆဲလို့ရတယ်။ မင်းဟာ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရင် ဒီဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ တရားခံအစစ်ဟာ Allah ဆိုတာ ယုံရမယ်… ဒါပဲ။
မြင့်မြတ်သည့်ငါတို့ မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒမရှိစေရ
မှတ်ချက်။ ။ မင်းရဲ့ ကော်မန့်တွေကို ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖျက်ပြီပါမည်.. ဒန်.. ဒန်.. ဒန်